Fumana ikhaya lakho leholide eBarcelos!
Indlu floor Ground kwindawo ezolileyo kwaye iphangalele izithuba imizuzu emi-5 ukusuka kumbindi Barcelos, kunye ibhasi ngeyure 200 leemitha ukusuka endlwini, imizuzu eli-15 ukusuka kunxweme eziliqela, a kwiimitha ezimbalwa ukusuka A Estrada exhuma iingongoma eziphambili lizwe kunye Francisco Isikhululo seenqwelomoya saseSá Carneiro.
Ndwendwela iBarcelos kwaye ufumane intsomi yeGalo de Barcelos eyaphefumlela isimboli sasePortugal esasasazeka kwiikona ezi-4 zehlabathi.
Ndwendwela emantla ePortugal kwaye uthandane nembonakalo yomhlaba yengingqi yeMinho.
Indlu epholileyo ukonwabela ixesha lokuzonwabisa kunye nosapho okanye nabahlobo, ilungele amaxesha amade, kunye nokungena komntu ngamnye kwindawo yabucala epheleleyo, ebekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo eneendawo eziluhlaza kwaye kufutshane nendawo enkulu apho unevenkile enkulu, ibhanki, ikhefi, indawo yokutyela. , umthengisi weentyatyambo, impahla, ubucwebe kwaye ulungele ukunxiba.
Indlu yethu ikwindawo yokuhlala epholileyo kwaye ezolileyo.
Ndiya kukuvuyela ukunceda iindwendwe zam kuyo yonke into enokwenzeka ngexesha lokuhlala kwazo, ukuba zinqwenela njalo.